Weebụ 2.0, Vidiyo ahụ | Martech Zone
Nke a gwa ke Problogger na bụ nnọọ mma.
Ọ bụrụ na ịhụghị vidiyo ahụ, ịnwere ike ịga na saịtị ahụ: KSU, Digital Ethnography
Ọ dị m nwute Careerbuilder! iFilm eburu Super Bowl Coms
Feb 6, 2007 na 11:31 PM
Chei, nke a bụ nkọwapụta vidiyo magburu onwe ya nke Web 2.0. Emere nke ọma, prọfesọ!
Ọ bụ ya mere eme m eziga onwe m "nkowa" nke Web 2.0 taa (tupu m hu vidiyo a). Ekwenyesiri m ike na Web 2.0 bụ maka ijikọ ndị mmadụ, mana gafere nke ahụ. Ọ bụ democratization nke Internetntanetị.